Autoclave | ဖိအားမြင့်ပေါင်းအိုး ဖြင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း
ဖိအားမြင့်ပေါင်းအိုး Autoclave ဖြင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ( Sterilization by using autoclaving) အကြောင်း တစေ့တစောင်း။
သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ပြသကြသော လူနာ အများစု အာရုံထားသော အချက်မှာ မိမိကို အသုံးပြုမယ့် ပစ္စည်း ပိုးသတ်ထားပါရဲ့လား ဆိုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပိုးသတ် မထားလျှင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် ကူးစက် ရောဂါများ ကူးစက်နိုင်သည် ဟူသော အသိပညာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရှိကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်သည် ကူးစက်ရောဂါများ များပြားလာသော ခေတ်ဖြစ်သည့်အလျှောက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ သားဖွားခန်းများ ခွဲစိတ်ခန်းများ သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ဟုခေါ်သာ Sterilization and Disinfection ကို ပိုမို ဆောင်ရွက်လာကြ ပါတယ်။ တိုးတက်လာသော ခေတ်နှင့် အညီ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းကို အဆင့်မှီစွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ကြပါတယ် ။ ထိုကဲ့သို့သော ဆောင်ရွက်ခြင်းများထဲမှ ကျွန်တော်တို့သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်းတွင် အသုံးပြုလျှက် ရှိသော ဖိအားမြင့်ပေါင်းအိုး Autoclave အကြောင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
Autoclaveဆိုတာ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်တစ်ခုအပေါ် ဖိအားပေးပြီး ပိုးသတ်တဲ့ ပေါင်းအိုး ဖြစ်ပါတယ်။
1️- ပိုးသန့်စင်မည့် ပစ္စည်းများအား Antiseptic Soap ဖြင့် အရင်ဆုံး စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောပါတယ်။
2️- ထို့နောက် ဖိအားမြင့်ပေါင်းအိုး Autoclaveထဲမထည့်မှီ Ultrasonic Cleanser ဖြင့် အရင်ပိုးသတ် ရပါတယ်။
3️- ထို့နောက် ထိုပစ္စည်းများအား ရေဆေးအခြောက်ခံကာ Sterilization Pouches ထဲသို့စနစ်တကျ ထည့်ပါတယ်။
4️- ထို့နောက် Autoclaveထဲသို့ စီရီစွာထည့်ကာ ပေါင်းပါတယ်။
5️- ပေါင်းပြီးသော ပစ္စည်းများအား Dental UV Light ဖြင့် ပိုးသတ် အခြောက်ခံပါတယ်။ ထိုအခြောက်ခံပြီးပါက ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Autoclaveကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကူးစက်နိုင်သော Bacterias , Viruses နှင့် ပိုးမွှားအကုန်လုံးကို ချေဖျက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ပိုးမွှားမဆို Autoclaveဖြင့်ပိုးသတ်ပြီးပါက သေကြေပျက်စီးပါတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Autoclaveက ပိုးမွှားများ ပေါက်ဖွားနိုင်သော Spores ပါ ချေဖျက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
☝ Autoclaveကို အသုံးပြုရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်တစ်ခုတွင် ဖိအားတစ်ခု နှင့်ပေါင်းစပ်ကာ အချိန်တစ်ခုတိုင် ပေါင်းထားရပါတယ်။ ဥပမာ အပူချိန် ပမာဏသည် 121'C ဖြစ်ခဲ့သော် ဖိအား အနေဖြင့် 15 psi ( pound per square inch ) ထားရှိပြီး15 မိနစ်တိုင် ပေါင်းရပါမယ် ။ အပူချိန်တိုးလာတိုင်း ဖိအားလဲ ပြောင်းလဲကာ ကြာမြင့်ချိန်လဲ ပြောင်းလဲလာပါမယ်။ ထို့ကြောင့် Autoclaveမှ ထွက်လာသော မည်သည့် ပစ္စည်းမဆို 100 % ပိုးမွှားကင်းစင်ပါတယ်။ Autoclaveဖြင့် ပိုးသတ်ထားသော ပစ္စည်းများအား လူနာများ အနေဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းတွင် တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များ . တစ်ခါသုံး အပ်များ တစ်ခါသုံးပစ္စည်းများဖြင့် လူနာများ၏ သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကုသမှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းများတွင် ပြသခဲ့သည်ရှိသော် ပိုးမွှားကင်းစင်ရန် သံသယရှိစရာ မလိုတော့ပါ။ ပိုးမွှားကင်းစင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ကုသမှုပေးသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာပင် ကုသမှုကို ခံယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ် ☺☺☺
Autoclave ဖြင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း Autoclave ဖြင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း Autoclave ဖြင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း
Autoclave ဖြင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ကျွန်တော်တို့သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းတွင် တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များ . တစ်ခါသုံး အပ်များ တစ်ခါသုံးပစ္စည်းများဖြင့် လူနာများ၏ သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကုသမှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းများတွင် ပြသခဲ့သည်ရှိသော် ပိုးမွှားကင်းစင်ရန် သံသယရှိစရာ မလိုတော့ပါ။ ပိုးမွှားကင်းစင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ကုသမှုပေးသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာပင် ကုသမှုကို ခံယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ် ☺☺☺ ကျွန်တော်တို့သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းတွင် တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များ . တစ်ခါသုံး အပ်များ တစ်ခါသုံးပစ္စည်းများဖြင့် လူနာများ၏ သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကုသမှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းများတွင် ပြသခဲ့သည်ရှိသော် ပိုးမွှားကင်းစင်ရန် သံသယရှိစရာ မလိုတော့ပါ။ ပိုးမွှားကင်းစင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ကုသမှုပေးသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာပင် ကုသမှုကို ခံယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ် ☺☺☺ ကျွန်တော်တို့သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းတွင် တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များ . တစ်ခါသုံး အပ်များ တစ်ခါသုံးပစ္စည်းများဖြင့် လူနာများ၏ သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကုသမှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းများတွင် ပြသခဲ့သည်ရှိသော် ပိုးမွှားကင်းစင်ရန် သံသယရှိစရာ မလိုတော့ပါ။ ပိုးမွှားကင်းစင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ကုသမှုပေးသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာပင် ကုသမှုကို ခံယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ် ☺☺☺ >Autoclave ဖြင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ကျွန်တော်တို့သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းတွင် တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များ . တစ်ခါသုံး အပ်များ တစ်ခါသုံးပစ္စည်းများဖြင့် လူနာများ၏ သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကုသမှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းများတွင် ပြသခဲ့သည်ရှိသော် ပိုးမွှားကင်းစင်ရန် သံသယရှိစရာ မလိုတော့ပါ။ ပိုးမွှားကင်းစင်သော ပစ္စည်းများဖြင့်